China IR sensor sensor Manufacturer - Ogo IR okpomọkụ ihe mmetụta - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Okpomọkụ mmetụta > Igwe ihe igwe okpomọkụ
Short ife na akara infrared temometa
Nchịkọta ihe ntanetị nke ntanetị na ntanetị nwere ike iji ya, na-emetụghị ihe ahụ aka, gbakọọ ọnọdụ okpomọkụ nke ihe ahụ site na ike infraredradiation nke ihe ahụ wepụtara, ma nwee ike tụọ ihe ndị siri ike ịbịaru ma ọ bụ si na ogologo dis ... ..
Temometa infrared n'ịntanetị
ShortwaveType Online Infrared Thermometer Nchịkọta enwere ike iji temomita infrared mee ihe, na-ebuteghị ihe ahụ, gbakọọ ọnọdụ okpomọkụ nke ihe ahụ na-eme ka ihe ọkụkụ ahụ na-eme ka infrared na-ebuwanye ibu, ma nwee ike ịlele ngwa ngwa ihe siri ike ịbịaru ma ọ bụ kwaga ...
High nkenke infrared temometa
Nchịkọta Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Elu Igwe Elu Igwe nke infrared enwere ike iji ya, na-ebuteghị ihe ahụ, gbakọọ ọnọdụ okpomọkụ nke ihe ahụ na-eme ka ihe ọkụkụ ahụ na-eme ka infrared siri ike, ma nwee ike ịlele ngwa ngwa ihe siri ike ịbịaru ma ọ bụ si na ... ...
Shortwave ụdị online infrared temometa
Enwere ike iji temomita infrared mee ya, na-enweghị imetụ ihe ahụ aka, gbakọọ ọnọdụ okpomọkụ nke ihe ahụ site na ike ọkụ nke infrared nke ihe ahụ wepụtara, ma nwee ike tụọ ihe ndị na-esiri ike ịbịaru ma ọ bụ ịkwaga site n'ebe dị anya. etinyere iji tụọ ihu igwe dị elu nke ihe ndị na-egbuke egbuke ma ọ bụ nke na-egbu maramara, ma nwee mmetụta mmetụ dị mma na-acha uhie uhie ma ọ bụ ihe na-egosipụta.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Igwe ihe igwe okpomọkụ na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Igwe ihe igwe okpomọkụ dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.